शारीरिक सम्बन्धको सट्टा दिन्थिन् डिग्रीको सर्टिफिकेट, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
शारीरिक सम्बन्धको सट्टा दिन्थिन् डिग्रीको सर्टिफिकेट, को हुन् उनि ?
एजेन्सी। शिक्षक वा प्राध्यापक ज्ञानको ज्योतिका स्रोत हुन्। उनीहरुलाई गुरु उपनामले पुकार्ने गरिन्छ। गुरु शब्द नै अति नै पवित्र छ। तर यही पवित्र शब्द र पद नै बेला बेला बदनाम हुने गरेका घटना धेरै छन्।
मद्रास उच्च अदालतले एउटा सनसनीखेजको खुलासा गरेको छ। अभियुक्त महिला कलेजकी एक प्रोफेसरलाई गिरफ्तार गरेपछि सबै चकित हुने तथ्यको खुलासा भएको हो। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण,
र मदुरै बेन्चका एसएस सुन्दरले निलम्बित सहायक प्राध्यापक निर्मला देवीको बारेमा विशेष खुलासा गरेको हो। प्रोफेसरलाई मदुरै कामराज विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग शारीरिक,
सम्बन्ध बनाउनका लागि विद्यार्थीहरुलाई डिग्रीमा राम्रो अंक र पैसा दिने सेटिङ्ग मिलाउने गर्थिन्। महिला विद्यार्थीहरु लाई प्रलोभनमा पारेर पुरुष प्राध्यापकको ओछ्यानमा पुर्याउने काम उनको थियो।
महिला विद्यार्थी महिला प्राध्यापकसँग नै बढी घुलमिल हुने र कुराकानी गर्दा कुनै शंका नहुने भएकाले मोटो रकम लिएर उनले यो काम गरिरहेको अदालतबाट प्रमाणित भएको छ।
सरकारी वकिलले अदालतलाई भने कि उनलाई जमानत दिन कुनै आपत्ति छैन। अदालतले प्राध्यापकलाई अनुसन्धानमा पुलिसलाई पूर्ण सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
र मिडियामा कुनै अन्तर्वार्ता दिन अस्वीकार गरेको छ, जसले अनुसन्धानलाई असर गर्न सक्छ। यसअघि तल्लो अदालत र उच्च अदालतले जमानत निवेदन खारेज गरेको थियो।
निजी कलेज देवंगा आर्ट्स कलेजकी प्राध्यापक देवी गत वर्ष अप्रिल १६ मा पक्राउ परेकी थिइन्। कलेज र महिला फोरमको उजुरीमा प्रोफेसरको छात्राहरुसँग कुराकानी गरेको,
एक अडियो भाइरल भएपछि प्रोफेसर विरुद्ध कारबाही गरियो। अडियो क्लिपमा प्रोफेसरले कथित रूपमा छात्राहरुलाई केहि अधिकारीहरुसँग सम्बन्धका लागि बातचित गरिरहेको सुनिन्थ्यो।
गिरफ्तारी हुनुभन्दा पहिले कलेजले आन्तरिक छानबिन गरेपछि प्रोफेसरलाई निलम्बित गरेको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि यो विवाद राज्यको सीआईडीलाई सुम्पिएको थियो।
देवीको सोधपुछको आधारमा पुलिसले सहायक प्राध्यापक वी मुरुगन र अनुसन्धान विद्यार्थी करुप्पास्वामीलाई उनीहरुको मुद्दामा संलग्न भएको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो।
उच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछि दुबै जनालाई सर्वोच्च अदालतले जमानत दिएको थियो। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सीबी–सीआईडीले अदालतमा २०० पृष्ठको आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
यसअघि जुलाई महिनामा १६०० पानाको पूर्व आरोपपत्र दायर गरिएको थियो। प्रहरीले यस मुद्दामा गम्भीर अनुसन्धान भैरहेको जनाएको छ। भारतमा यस प्रकृतिको घटना धेरै घट्ने गरेको छ।
यसै गरि, कोरोनाभाइरसका कारण गरिएको लकडाउनमा आम्दानीको बाटो बन्द भएपछि भाडाको घरमा बस्नेहरुलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ। रोजगारी गुमेपछि मानिसहरुसँग घरभाडा तिर्ने समेत पैसा छैन।
अमेरिकाको नेशनल फेयर हाउजिङ एलायन्स एनएफएचएको एक रिपोर्टको हवाला दिँदै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले लेखेको समाचार अनुसार सय भन्दा धेरै फेयर हाउजिङ समूहहरुले पूरै अमेरिकामा मानिसहरुलाई यो समस्यासँग जुधिरहेका देखेका छन् ।
यो महामारीको बीचमा अमेरिकामा यौन उत्पीडनका घटना १३ प्रतिशतले बढेका छन्। एक महिलाले एनएफएचएको वेबसाइटको माध्यमबाट भनिन् ‘यदि मैले मेरो प्रोपर्टी म्यानेजरसँग सेक्स गर्न अस्वीकार गरेको भए
उसले मलाई घरबाट निकालिदिन्थ्यो। एक सिंगल मदर भएको नाताले मसँग अर्को कुनै विकल्प बाँकी थिएन। म आफ्नो घर गुमाउन चाहन्नथें। भाडाको बदलामा सेक्सको माग गर्नेहरु अब अमेरिकाका साथै बेलायतमा पनि जाँचको दायरामा आएका छन्।
सेक्सको बदलामा भाडा माफ गरेर आवास सुविधा दिने नाममा बढिरहेका अनलाई विज्ञापनहरुबाट पनि पदा उठाउन थालिएको छ। विश्वभरी फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्।
लकडाउन र यात्रामा प्रतिबन्ध भएका कारण व्यवसाय ठप्प छ। आयका सबै माध्यम समाप्त भएपछि मानिसहरु आर्थिक अभावसँग जुधिरहेका छन्। उत्तरी अमेरिका र युरोपेली अथोरिटीहरुले क्यास बेनिफिट रेन्ट,
फ्रिजिस र निष्काशन प्रतिबन्ध सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरेका छन्, ताकि मानिसहरुलाई धेघर हुनबाट बचाउन सकियोस्। एनएफएचएका सल्लाहकार मोर्गन विलियम्सका अनुसार घरबाहिर निस्कन नपाउने मानिसहरुको लागि कैयौं पटक निकै कठिन विकल्प बाँकी हुन्छन्।
यिनैमध्येको एक भाडाको बदलामा सेक्सको पूरै तथ्यांक खोज्नु निकै कठिन छ। विशेषज्ञहरुका अनुसार कानुनको राम्रो ज्ञान नभएका कारण घरबेटीको शिकार बनेका पीडित महिलाहरुमाथि उल्टै वेश्यावृत्तिको आरोप लाग्न सक्ने खतरा छ।
बेलायतको हाउसिङ च्यारिटी शेल्टरको २०१८ को एक रिपोर्टअनुसार विगत ५ वर्षमा प्रोपर्टी म्यानेजरहरुले करिब अढाइ लाख महिलाहरुलाई भाडाको बदलामा सेक्सको अफर गरेको पाइएको छ।